Muxuu Ahaa Dabaal Degii Neymar Jr & Mbappe Ee Kulankii Liveprool? Iyo Marney Oo Maaliyada Liverpool Ku Dabaal Degay. - Gool24.Net
Muxuu Ahaa Dabaal Degii Neymar Jr & Mbappe Ee Kulankii Liveprool? Iyo Marney Oo Maaliyada Liverpool Ku Dabaal Degay.
Gool dhaliyaha xulka qaranka Brazil iyo kooxda PSG ee Neymar Jr ayaa xalay kooxdiisa ka caawiyay in ay guul 2-1 ah ka gaadheen kooxda Liverpool isaga oo waliba Neymar dhaliyay goolkii labaad ee guusha ka caawiyay kooxdiisa PSG.
Laakiin waxaa indhaha caalamku qabteen dabaal degii ka badbadiska ahaa ee ay Neymar Jr iyo Kylian Mbappe isla sameeyeen kadib markii uu Neymar Jr dhaliyay goolkii labaad ee PSG ee qaybtii hore ee kulankii Liverpool, waxayna taasi keentay in baraha bulshada looga hadlay ujeedadii dabaal degii Neymar iyo Mbappe.
Laakiin sidoo kale Neymar Jr ayaa markii ay soo dhamaatay ciyaartii Liverpool iyo kooxdiisa PSG waxa uu ku dabaal degay maaliyada Liverpool gaar ahaan garanka uu xidho goolhayaha xulkiisa Brazil ee Alisson Becker kaas oo uu ka dhaliyay goolkii labaad ee uu guusha ugu horseeday kooxdiisa PSG.
Haddaba maxay jamaahiirta kubbada cagtu ka fahmeen dabaal degii Neymar Jr iyo Mbappe ee kulankii Liverpool?
Taageerayaasha kubbada cagta aduunka ayaa baraha bulshada ku soo bandhigay in dabaal degii Neymar Jr iyo Mbappe uu ahaa dabaal deg lacag ah laakiin sababta dabaal dega lacagta ayaa ah mid lagu kala aragti duwanaaday.
Dadka qaar ayaa aaminsan in Neymar Jr iyo Mbappe ay muujinayeen in lacagtii ay kooxdooda PSG kula soo wareegtay tahay tan u goyn karta Champions League maadaama oo ay kulan wayn guul ku taagnaayeen.
Laakiin sidoo kale waxaa loo fahmi karaa in ay yihiin xidigaha aduunka ugu qaalisan oo iska kaashaday gool muhiim u ahaa kooxdooda oo halis ugu jirtay in ay hadho balse waxaa laysku raacay in noocii dabaal deg ee Neymar iyo Mbape uu ahaa mid lacagaysan.
Laakiin sidoo kale qaabkii ay Neymar Jr iyo Mbappe u wada ciyaareen kulankii Liverpool isla markaana uu Cavani go’doonka ugu jiray ayaa laga fahmay in Neymar iyo Mbappe ay iska bahaysteen Cavani isla markaana ay labadoodu yihiin kuwa sida gaarka ah u wada shaqaynaya.
Mid ka mid ah taageerayaasha kubbada cagta ayaa soo qoray: “Neymar iyo Mbappe waxay dabaal dega ku daadinayaan lacagtooda”
Taageere kale ayaa soo qoray: “Lacagtu waxay kuu iibin kartaa Champins League- si sahlan waa mincaha dabaal degii Neymar ee kulankii Liverpool”.
Si kastaba ah ahaatee, Neymar Jr ayaa qaab ciyaareed fiican ka sameeyay kulankii Liverpool balse waxaa wali sii socda eedaynta loogu soo jeedinayo in uu si sahlan dhulka iskugu tuurayo oo iska dhigayo sidii ciyaartoy la jabiyay balse haddana uu si sahlan ku soo kacayo taas oo ahayd wixii sumcadiisa dhulka dhigtay koobkii aduunka.